ဟယ်လိုဝင်း !! အကောင်းဆုံးအက်ပလီကေးရှင်းများနှင့်ဂိမ်းများကိုစုစည်းထားခြင်း Androidsis
Nerea Pereira | | Android application များ, Android ဂိမ်းများ
အဆိုပါချောင်းမြောင်းထာဝရခဲ့ပေမယ့်နောက်ဆုံးတော့ရောက်ရှိလာခဲ့သည် ဟယ်လို 2018။ ကျွန်ုပ်တို့သည်အကောင်းဆုံးသောအဝတ်အစားများသို့မဟုတ်စိတ်ပျက်စရာအကောင်းဆုံးဝတ်စုံများကိုဝတ်ဆင်ပြီးကျွန်ုပ်တို့၏သူငယ်ချင်းများနှင့်အတူညတစ်ညကြောက်ရွံ့မှုနှင့်ပျော်စရာကောင်းသောညများစောင့်စားခဲ့ရသောကြာမြင့်စွာစောင့်မျှော်နေသည့်ရက်စွဲအကြောင်းပြောနေခြင်းဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်ပျော်ရွှင်ဖွယ်ကောင်းသောလူသေတို့၏ညကိုပျော်မွေ့ရန်ရက်သတ္တပတ်အနည်းငယ်အတွက်မတူညီသောစုဆောင်းမှုများကိုပြင်ဆင်နေခြင်းဖြစ်သည်။
တစ်ယောက်ယောက်ကသေပြီလို့ပြောခဲ့သလား ဒီအားသာချက်ကိုယူတာထက်ပိုကောင်းတဲ့အရာမရှိပါ ဟယ်လို 2018 ဖုတ်ကောင်မကျန်အောင်နှိမ်နင်းနိုင်ဖို့အကောင်းဆုံးထိပ်နဲ့ထိပ်ကိုပြင်ဆင်ထားတယ်Android panorama တွင်ရှာတွေ့နိုင်သည့်ဖုတ်ကောင်ဂိမ်းများ.
ထိုထက်မကရှိနေသေးသည်။ မင်းမသွားဘူး သင့်ဖုန်းကိုအခြားထိတွေ့မှုပေးရန်ဟယ်လိုဝိန်း၏အားသာချက်ကိုယူပါ? မင်းထက်ပိုကောင်းတဲ့အရာ သင့်ရဲ့ Android ကိုစိတ်ကြိုက်ပြုလုပ်ရန် application များကွဲပြားခြားနားသောအလွှာများနှင့်တကယ်ကြောက်စရာနောက်ခံပုံများနှင့်အတူ။
သင်မလောက်ဘူးလား ကောင်းပြီ သင့်ရဲ့ Android ကိုဒီဟယ်လိုဝင်းကိုစိတ်ကြိုက်ပြုပြင်နိုင်တဲ့ application များ သင်၏မိတ်ဆွေများကိုမနာလိုမှုဖြစ်စေနိုင်သည်။ ဤ app အားလုံးသည်အခမဲ့ဖြစ်ပြီးဂူဂဲလ်အပ်ပလီကေးရှင်းမှဒေါင်းလုပ်လုပ်နိုင်သည်ကိုသတိပြုသင့်သည်။ ထို့ကြောင့်၎င်းတို့ကိုပျော်မွေ့ရန်ယူရိုကိုပေးစရာမလိုပါ။
ကြောက်စရာကောင်းသောဟယ်လိုဝိန်း 2018 ကိုခံစားရန်အက်ပ်များနှင့်ဂိမ်းများ
သငျသညျသိခဲ့ပါ ဂူးဂဲလ်ဟာဟယ်လိုဝင်းအတွက်ကစားဖော်ဂိမ်းကိုထုတ်ပေးခဲ့ပြီလား။ ဟုတ်ပါတယ်၊ အင်တာနက်ကုမ္ပဏီကြီးသည် Night of the Dead ၏အားသာချက်ကိုယူပြီးသင့်အားအမှန်တကယ်ပျော်စရာအချိန်ဖြစ်စေမည့်အက်ပလီကေးရှင်းတစ်ခုစတင်ခဲ့သည်။
ပျော်စရာအဘို့ပေမယ့်၏ဂိမ်းအသစ် PUBG Mobile ကိုယခုဟယ်လိုဝိန်းအတွက်အသစ်ပြုပြင်လိုက်ပြီ တကယ်ကိုစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့သတင်းတချို့ကိုပေးနေတယ်။ မင်းသူတို့ကိုလွမ်းနေပြီလား
ကျွန်ုပ်တို့အများစုသည်တစ်ညတည်းခိုလိုကြသည် ဟယ်လို အိမ်မှာသာယာတဲ့။ သင်အကြိုက်ဆုံးစီးရီးကိုနှစ်သက်စဉ်အိပ်ရာပေါ်တွင်နွေးထွေးရန်သင်၏အစီအစဉ်ရှိပါသလား။ ပြီးတော့ဒီအရာအားလုံးကိုသင်ဘာကြောင့်အသုံးမချတာလဲ ကြောက်စရာရုပ်ရှင်များကိုအခမဲ့ကြည့်ရှုနိုင်မည့် application များ Android ဖုန်းမှာလား။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Androidsis ပါ » Android application များ » ဟယ်လိုဝင်း !!